Madopar (မဒိုပါ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Madopar (မဒိုပါ)
Madopar (မဒိုပါ) ကဘာလဲ။
Generic Name: Madopar (မဒိုပါ) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Madopar (မဒိုပါ) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Madopar® ကိုပါကင်ဆန် ရောဂါ (ခြေလက်တုန်ခါသည့် အာရုံကြောရောဂါတစ်မျိုး ) တွင် အဓိကအသုံးပြုပါသည်။ Madopar® သည် ပါကင်ဆန်ရောဂါ ကုသသည့်ဆေးများအုပ်စုတွင် ပါဝင်ပါသည်။ ထိုဆေးများသည် ဗဟိုနာ့ဗ်ကြောအဖွဲ့ ကိုအာနိသင ်သက်ရောက်စေပါသည်။ ပါကင်ဆန်ရောဂါ ၏ လက္ခဏာများသည် ဦးနှောက်အတွင်းရှိ သဘာ၀ ပစ္စည်းတစ်မျိုး ဖြစ်သည့် dopamine လျော့နည်းသောကြောင့် ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Madopar ကထိုပစ္စည်းကို ပြန်လည် ကူညီ ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။
ကြွက်သားများထိန်းချုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသောကြောင့် ခန္ဓါကိုယ်၏ ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုများကိုတိုးတက်စေပါသည်။
Madopar (မဒိုပါ) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Madopar® ဆေးတောင့် သို့ ဆေးပြားများကိုရေသို့ အရက်မပါဝင်သောအရည် တစ်ဖန်ခွက်ဖြင့် တပြားလုံးသောက်ရပါမည်။
Madopar ® HBS ဆေးတောင့်ကိုမဝါးပဲမဖွင့်ပဲရေနဲ့မဖျော်ပဲတစ်တောင့်လုံးသောက်ပါ။
ဆေးအာနိသင်လျှင်မြန်သော MADOPAR® ဆေးပြားများသည် မြိုချရန်ခက်ခဲသောသူများနှင့် ဆေးအာနိသင်မြန်မြန် လိုချင်သူများအတွက်ဖြစ်ပါသည်။
ဆေးပြားကိုအနည်းဆုံးရေ 25-50ml ထဲတွင် ဖျော်သင့်သည်။
ဆေးပြားများသည် မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းပျော်သွားပြီး နို့ရည်ကဲ့သို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။
မိနစ် ၃၀ အတွင်းသောက်သင့်ပါသည်။ မသောက်ခင် မွှေပေးရန်သတိရပါ။
Madopar (မဒိုပါ) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Madopar® ကိုအခန်းအပူချိန်မှာတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Madopar® ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
Madopar® ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Madopar® ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Madopar (မဒိုပါ) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အောက်ပါအချက်များရှိလျှင် Madopar® ကိုမသောက်ပါနှင့်
levodopa နှင့် benseraziadeပါဝင်သောဆေးများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း
လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ် အတွင်း tranylcypromine or phenelzineကဲ့သို့ non-selective monoamine oxidase inhibitor (MAO-I) medicine သောက်ထားခြင်း
Moclobemideကဲ့သို့ selective MAO – A inhibitor နှင့် selegiline/ rasagilineကဲ့သို့ selective MAO – B inhibitor တို့ကိုပေါင်းသောက်ထားခြင်း
မကုသရသေးသော နှလုံး၊ အသည်း၊ ကျောက်ကပ၊် အဆုတ၊် သွေး၊ နှင့် ဟော်မုန်းရောဂါ များရှိခြင်း
မျက်လုံးတွင် ရေတိမ်ရောဂါရှိခြင်း (မျက်လုံးတွင်းဖိအားများနေခြင်း)
ပြင်းထန်သောစိတ်ရောဂါများကုသမှု ခံယူထားရလျှင် (active psychosis or serious psychoneurosis).
အသက် ၃၀ အောက်ဖြစ်လျှင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Madopar (မဒိုပါ) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Madopar® က ိုကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များနှင့် သေချာစွာ သန္ဓေတားခြင်းမပြုလုပ်ထားသောကလေးရနိုင်ချေရှိသောအမျိုးသီးများ မသောက်သုံးသင့်ပါ။
benserazideသည်နို့ရည်ထဲပါဝင်ခြင်းရှိမရှိမသေချာသော်လည်းMadopar® သောက်နေရသောအမေများကလေးကို နို့မတိုက်သင့်ပါ။
ကလေးများအရိုးဖွံ့ဖြိုးမှု မူမမှန်ဖြစ်နိုင် ခြင်းရှိမရှိသေချာမပြောနိုင်သေးသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
Madopar (မဒိုပါ) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
မူမမှန်သော ခန္ဓါကိုယ် လှုပ်ရှားမှုများ
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများ ( ယုံမှားလွန်ခြင်း၊ စိတ်ကျခြင်း၊ စိတ်တက်ခြင်း၊ စိတ်တိုစိတ်ဆတ်ခြင်း၊ အာရုံချောက်ချားခြင်း)
ဆီးအရောင်ရင့်ခြင်း၊ ပါးစပ၊် တံတွေး၊ လျှာ၊ သွားတို့တွင် နီနေခြင်း
ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုခံစားရမှုမှာတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါကသင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Madopar (မဒိုပါ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Madopar® ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေ မပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Madopar (မဒိုပါ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Madopar® က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Madopar (မဒိုပါ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Madopar® ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေ အကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြးီပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Madopar (မဒိုပါ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
စစသောက်ချင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသောပမာဏမှာMadopar 50mg/12.5mg ဆေးတောင့်/ဆေးပြားကိုတစ်နေ့ ၃ ကြိမ်မှ ၄ကြိမ် နေ့တိုင်းသောက်ရန်
ရောဂါ အခြေအနေဆိုးပါကစသောက်ချင်းတွင် Madopar 100mg/25 mg ဆေးတောင့်/ဆေးပြားကိုတစ်နေ့ ၃ ကြိမ် နေ့တိုင်းသောက်ရန်
ထို့နောက်နေ့စဉ်ဆေးပမာဏကိုMadopar 100mg/25 mg ဆေးတောင့်/ဆေးပြား
ထပ်တိုးပါ။ သို့မဟုတ် ထိုပမာဏနှင့်ညီအောင် တစ်ပတ်တစ်ခါ သို့ နှစ်ခါ ဆေး၏ အာနိသင်များရသည်အထိသို့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပေါ်လာသည်အထိသောက်ပါ။
အသက်ကြီးသောလူနာများတွင် ပထမအကြိမ်အတွက် သတ်မှတ်ထားသောပမာဏမှာMadopar 50mg/12.5mg ဆေးတောင့်/ဆေးပြားကိုတစ်နေ့ ၁ ကြိမ်မှ ၂ ကြိမ်နေ့တိုင်းသောက်ရန်
၃ရက် သို့ ၄ရက်သောက်ပြီးတိုင်းတွင် ဆေး ၁တောင့်/ ၁ပြားတိုးပါ။
ထိရောက်သောဆေးပမာဏရရှိရန်အတွက် Madopar 100mg/ 25mg ဆေးတောင့်/ဆေးပြား ၄တောင့်/ပြားမှ ၈တောင့် /ပြားအထိ ( Madopar 200mg/ 50mg ဆေးတောင့်/ဆေးပြား၂တောင့်/ပြားမှ ၄တောင့် /ပြားအထိ ) နေ့စဉ် အကြိမ်များခွဲ၍ သောက်ရန်
လူနာအများစုသည် ၁ နေ့လျှင ်Madopar 100mg/ 25mg ဆေးတောင့်/ဆေးပြား ၆တောင့်/ပြားအထက် လိုအပ်ပါသည်။
ရောဂါအခြေအနေမတိုးတက်တာမျိုးမဖြစ်လျှင် အနည်းဆုံး ၆လ အထိကုသမှုခံယူသင့်ပါသည်။
Levodopa တစ်မျိုးထဲသောက်နေခြင်းကိုရပ်၍ နောက်တစ်ရက်တွင် Madopar စသောက်ပါ။
စစသောက်ချင်းတွင် 500mg levodopa သောက်သည့် ဆေးပြားအရေအတွက်ထက် Madopar 100mg/25mg ကို ၁တောင့်/၁ပြား လျှော့သောက်ပါ။ ( ဥပမာ – လူနာက ၁ရက် လျှင် Levodopa 2g (၄ပြား) သောက်သည်ဆိုပါကနောက်တစ်ရက်တွင် Madopar 100mg/25mg ၃တောင့်/ပြားသောက်သင့်ပါသည်။ )
၁ ပတ်လောက်စောင့်ကြည့်ပြီးနောက် လိုအပ်လျှင် လူနာအသစ်အတိုင်းဆေးပမာဏကိုတိုးသောက်နိုင်ပါသည်။
အခြား Levodopa/ decarboxylase inhibitor combinations သောက်နေသူများ
သောက်နေသောဆေးများကို ၁၂နာရီ ကြိုဖြတ်ထားရမည်။
Levodopa ဖြတ်လိုက်ခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလျော့နည်းစေရန်အတွက် သောက်နေသောဆေးများကိုညဘက်တွင်စဖြတ်ပြီးMadoparကိုနောက်တနေ့ မနက်တွင် စသောက်သင့်ပါသည်။ စစချင်းတွင် Madopar 50mg/ 12.5 mg ဆေးတောင့်/ဆေးပြား ၁ တောင့်/ပြားကိုတစ်နေ့ ၃ ကြိမ်မှ ၄ ကြိမ်အထိသောက်ရမည်။
နောက်ပိုင်းတွင် levodopa မသောက်ဖူးသူများတွင်ကဲ့သို့ ဆေးပမာဏကိုတိုးသွားနိုင်ပါသည်။
Madopar နှင့်အတူအခြားပါကင်ဆန် ရောဂါ အတွက်ဆေးများကိုတွဲပေးနိုင်ပါသည်။
အခြားပါကင်ဆန် ရောဂါ အတွက်ဆေးများ (ဥပမာanticholinergics or amantadine) သောက်နေသည်ဆိုပါကMadoparစသောက်ချိန်တွင် ဆက်သောက်နိုင်ပါသည်။
သို့သော် Madoparဆက်သောက်နေပြီးရောဂါအခြေအနေတိုးတက်လာသည်ဆိုပါကအခြားဆေးများကိုလျော့သောက်ရန် သို့မဟုတ် တဖြည်းဖြည်းရပ်ရန် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
အသ်ကြီးလာလျှင် Levodopa ကိုတုန့်ပြန်နိုင်စွမ်းလျော့နည်းလာသော်လဲMadoparကိုကောင်းကောင်းတုန့်ပြန်နိုင်သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
ကလေးတွေအတွက် Madopar (မဒိုပါ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Madopar® ကိုသင့်ကလေးငယ်အတွက် သောက်သုံးရန် စိတ်ချရမှုရှိချင်မှရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဆေးဝါးမဆို အသုံးမပြုရသေးခင်မှာစိတ်ချရမှုအနေအထားကိုအပြည့်အဝနားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံရရှိရန်အတွက် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Madopar (မဒိုပါ) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Madopar® ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံ၊ ပမာဏများနှင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Madopar® 62.5 ဆေးတောင့်တွင် levodopa 50 mg နှင့် benserazide 12.5 mg ပါဝင်သည်
Madopar® 125 ဆေးတောင့်တွင် levodopa 100 mg နှင့် benserazide 25 mg ပါဝင်သည်
Madopar® 250 ဆေးတောင့်တွင် levodopa 200 mg နှင့် benserazide 50 mg ပါဝင်သည်
Madopar® HBS 125 (slow – release) ဆေးတောင့်တွင် levodopa 100 mg နှင့် benserazide 25 mg ပါဝင်သည်
Madopar® 125 ဆေးပြားတွင် levodopa 100 mg နှင့် benserazide 25 mg ပါဝင်သည်
Madopar® 250 ဆေးပြားတွင် levodopa 200 mg နှင့် benserazide 50 mg ပါဝင်သည်
ဆေးအာနိသင် မြန်မြန်ထုတ်ပေးသောMadopar® ဆေးပြားများ
Madopar® 62.5 ဆေးပြားတွင် levodopa 50 mg နှင့် benserazide 12.5 mg ပါဝင်သည်
Madopar® ကိုသောက်ဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရရခြင်းသောက်ပါ။ အကယ်၍ နောက်တစ်ကြိမ် သောက်ရမည့်အချိန်နှင့် ကပ်နေပြီဆိုပါကလွတ်သွားသောအကြိမ်ကို မသောက်ပါနှင့်တော့။ ပုံမှန် အကြိမ်များအတိုင်းသာဆက်သောက်ပါ။ နှစ်ကြိမ်စာ တစ်ခါတည်း မသောက်ပါနှင့်။
Madopar.https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/1709. Accessed November 1, 2016.
Madopar.http://www.netdoctor.co.uk/medicines/brain-and-nervous-system/a7053/madopar-for-parkinsons-disease/. Accessed November 1, 2016.